Novena yemabhonasi eKrisimasi, mubatanidzwa wemhuri | Absolut Kufamba
Kisimusi bhonasi novena, mhuri yemubatanidzwa
Daniel | | Korombiya
La Strenna Novena Icho chimwe chei Tsika yeKisimusi inonyanya kukosha uye yakadzika midzi Korombiya. Iyo zvakare inozivikanwa kwazvo mune dzimwe nyika dzeSouth America, senge Venezuela kana Ecuador. Kukosha kwaro kunodarika chinongori chiitiko chechitendero, ichiva chiitiko chemagariro uye tsika yakatemerwa kubatana kwemhuri.
Munguva yeAdvent, kwemazuva mapfumbamwe (kubva Zvita 16 kusvika 24, zvichibatanidzwa), mhuri dzinobva kumativi ese enyika dzinouya pamwechete ku namatai pamwe chete uye muimbe nziyo dzeKisimusi. Nzvimbo yemusangano inogara iri Nzvimbo yeKuberekwa kana Chiitiko chekuzvarwa, iri munzvimbo yepakati mumba. Izwi rekuti "pfumbamwe" rinobva chaizvo pamazuva mapfumbamwe iwayo. Chirevo chepfungwa cheKisimusi.
1 Kwakatangira iyo Novena yeAguinaldos
2 Kunamata Novena
Kwakatangira iyo Novena yeAguinaldos
Iyi tsika yakanaka yechiKaturike yakazvarwa munyika dzeAmerica, munguva dzekoloni. Chaizvoizvo Fray Fernando de Jesus Larrea, wechitendero cheFranciscan akaberekerwa muQuito, uyo aizotanga tsika iyi. Izvo zvese zvakatanga muna 1725, mushure mekugadzwa kwake semupristi. Pfungwa yekunamata padyo neKuberekwa kweMwana Jesu mukati memazuva mapfumbamwe Krisimasi isati yasvika yakave nemugumo mukuru pakati pevanonamata.
Zvisinei, nzira iyo mhuri nhasi inopemberera nayo Aguinaldos Novena muColombia iri nekuda kwekushandurwa kunoitwa ne amai Maria Ignacia, pakupera kwezana ramakore reXIX. Iye ndiye akapa iyi minamato chimiro checanonical, achiwedzerawo mafaro, zvinova ndizvo zvinonzi nziyo dzakapindirwa pakati pemunamato nemunamato.
Uye zvakadaro, hapana vhezheni imwe yeNovena de Aguinaldos yakapona kusvika nhasi, asi akati wandei. Zvimwe zvinodzokororwa muchiSpanish chekare, zvimwe zvechinyakare uye zviri kure nekunzwisisa kwezvazvino, uchishandisa, semuenzaniso, chimiro chekuremekedza "vos". Vamwe, zvisinei, vakagadziridzwa kuitira kuti vagadzirise chirevo chive mutauro wazvino.
Izvi zvakanaka Video Zvinorehwa nemunamato weNovena de Aguinaldos munharaunda yeColombia zvakapfupikiswa.
Sezvauri kuona, kune veColombia maNovena de Aguinaldos haisi tsika yechitendero chete, asiwo chikonzero chekusimbisa zvisungo pakati peshamwari nemhuri. Iyo Kisimusi gastronomy and the mimhanzi ivowo havasi kupotsa musangano uyu.
Kunyangwe pairi isina hanya toni uye akajairika hunhu, iyo Novena de Aguinaldos Iwo mutambo unotevera zvakanyatsotsanangurwa nhungamiro nemitemo. Zvinogara zvichitanga musi waZvita 16 uye zvinopera musi weKisimusi. Mune dzimwe dzimba munamato unoitika usati wadya, nepo kune vamwe unosiirwa kumberi.
Novena yeStrenna inopembererwa semhuri
Pfungwa iri shure kwetsika iyi ndangariro dzemwedzi Jesu asati azvarwa, nguva inoguma nekuzvarwa kwake muBheterehema. Amai María Ignacia, avo vakaomesa nzira yekunamata ma novenas, vakasimbisa iyo kurongeka kwemitsara zvinotevera:
Kutanga iyo Munamato wezuva nezuva, nekutendeka kutevera chinyorwa chekutanga chaFray Fernando de Jesús Larrea. Mushure mekuverenga uku, iyo "Mbiri kuna Baba".
Inoteverwa gare gare ne kufunga kwezuva. Pane imwe yezuva rimwe nerimwe remazuva mapfumbamwe.
La munamato kuMhandara Yakaropafadzwa inouya inotevera, ichiteverwa nemunamato wa pfumbamwe Rumbidzai Marys (imwe yeimwe novenas).
Ipapo ndiko kuchinjika kweiyo munamato kuna Mutsvene Joseph, iyo inoverengwawo mazuva ese. Kuverenga kunopera neminamato mitatu: iyo "Baba Vedu", iyo "Rumbidzai Maria" uye "Mbiri kuna Baba."
ari Mufaro kana Kushuvira kwekuuya kweMwana Jesu gadzira chikamu chinoridza mimhanzi cheiyo novena. Izwi rinodzokorora nziyo, idzo dzinowanzo kupindurwa nekwaya.
Mushure meizvi kunouya iyo munamato kuMwana Jesu, iyo neimwe nzira iri yepakati chikamu chechipfumbamwe. Mushure make, vatori vechikamu vanotora mukana wekuumba zvikumbiro zvavo kumucheche Jesu, kazhinji zvishuwo zvehutano nekubudirira kweimba nemhuri.
Yechipfumbamwe inopedzisa ne mitsara yekupedzisira, iyo ingangoita nguva dzose kuva yedu Baba uye Kubwinya kuna Baba.
Iyi minamato nenziyo zvinofanirwa kutaurwa yega yega uye rimwe nerimwe remazuva mapfumbamwe. Semuenzaniso weizvo zvatsanangurwa pamusoro, ichi ndicho chinyorwa chekutanga naFray Fernando de Jesús Larrea iyo inotanga imwe neimwe yezvirongwa zveNovena de Aguinaldos:
«Mwari ane moyo wakaipa werudo rusingaperi, anoda varume zvakanyanya, zvekuti iwe wakavapa mumwanakomana wako chibvumirano chakanakisa cherudo rwako kuti, akaita munhu mudumbu reMhandara, anozozvarirwa muchidyiro chehutano hwedu nemushonga. . Ini, pachinzvimbo chevanhu vese venyama, ndinokupai kuvonga kusingaperi nekuda kwekubatsira kwakadai; uye mukudzoka kwaari ndinokupa urombo, kuzvininipisa uye humwe hunhu hwemwanakomana wako akafanirwa nevanhu, ndichikuteterera iwe nezvehunhu hwake hwoumwari, nekunetseka kwaakaberekwa nako, uye nemisodzi nyoro yaakateura muchidyiro, kuti iwe unorasa moyo yedu nekuzvininipisa kwakadzama, nerudo runopisa, nekuzvidza kuzere kwezvinhu zvese zvepanyika, kuitira kuti Jesu achangozvarwa ave nechavo chake mavari, agare nekusingaperi. Ameni ".
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Kisimusi bhonasi novena, mhuri yemubatanidzwa
Medusa, iya ine nyoka mumusoro
Iyo ngamera, nzira inoshanda kwazvo yekufambisa